သင်ဘယ်လိုအလွန်အမင်းအောင်မြင်စွာတက်လိုက်လျှောက်သလဲ Lego Friends ကြိုက်တယ် 21319 ဗဟို Perk? တူအောင်မြင်စွာအကြီးအကျယ်အစုံနှင့်အတူ Lego Creator Expert 10292 အဆိုပါ Friends Apartments.
ဘယ်တော့လဲ Lego Ideas ဖြန့်ချိ 21319 ဗဟို Perk စက်တင်ဘာလ 2019 ခုနှစ်တွင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်စတိုးဆိုင်သီးသန့်အဖြစ်ကချက်ချင်းထွက်ရောင်းချခဲ့သည်။ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ထွက်ပေါ်လာသည့်နောက်၎င်းသည်ထပ်မံရောင်းထွက်ခဲ့သည်။ The Lego အလွန်ကောင်းမွန်စွာလက်ခံရရှိထားသည့်ဖန်တီးမှုကမ်းလှမ်းချက်ကို Group မှ ၀ ယ်လိုအားမမှီနိုင်ပါ Friends ပရိသတ်များသည် ၁၉၉၀ နှင့် ၂၀၀၀ ခုနှစ်များအကြိုက်ဆုံးအကြိုက်ဆုံးဇိမ်ခံပစ္စည်းများအတွက်အကောင်းဆုံးသောအခမ်းအနားဖြစ်သည်။
လိမ္မာပါးနပ်သောတည်ဆောက်မှုတစ်ခုတွင်ဇာတ်ကောင်ခြောက်လုံးပါ ၀ င်သည်။ Gunther၊ ကျော်ကြားသည့်ဆိုဖာနှင့်ပြပွဲ၏ ၁၀ နှစ်တာကာလအတွင်းကိန်းဂဏန်းများကိုညွှန်းဆိုသောအရာများစွာရှိသည်။ အစုတခုအနေဖြင့်၎င်းသည်၎င်း၏သက်ရောက်မှုများကိုထင်ဟပ်ပြသသည့်အသက်အရွယ်မရွေးပရိသတ်နှင့်ပဲ့တင်ထပ်ထားသည်art ၏ရေရှည်အယူခံဝင်မှပူးတွဲမှု FriendsNetflix တွင်အမြဲတမ်းနေထိုင်ခြင်းအပါအ ၀ င်ပြသသည့်ပြန်လည်ပြေးလမ်းအရေအတွက်အမှန်ပင်ရှိသည်။
ပြန်လည်ဆန်းစစ်သူများနှင့်ပရိသတ်များအကြားတွင်အလွန်ရေပန်းစားကြောင်းသက်သေပြထားသည့် set ကိုသင်မည်သို့လိုက်လျှောက်မည်နည်း။ ဒါကထားတာဝန်ဖြစ်ခဲ့သည် Lego Creator Expert အသင်းနှင့်သူတို့၏အဖြေကြီးမားသောသွားဖို့ဖြစ်ခဲ့သည်။ အရမ်းကြီး။ တကယ်တော့အတွက်အများကြီးပိုနှစ်ဆအဖြစ်ကြီးတွေ။ အောက်ပါအစား 21319 ဗဟို Perk Monica နှင့်ရာခေလ၏ ap နှင့်အတူartment သို့မဟုတ်ဂျိုနှင့် Chandler ရဲ့ APartment, အ Lego Group မှတစ် ဦး ၏ behemoth ထုတ်လုပ်ခဲ့သည် Lego အစုံ, 10292 အဆိုပါ Friends Apartments.
2,048 အပိုင်းပိုင်းဖြတ်ပြီးလာပါတယ် Lego ၏မော်ဒယ်များ နှစ်ခုလုံး apartတီဗွီအစီအစဉ်မှလူသိများသောပုံပြင်များနှင့်ရယ်မောခြင်း၊ ဘဝနှင့်ချစ်ခြင်း၏အမှတ်ရစရာအချိန်များနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ တစ်ခုချင်းစီကို apartment သည်အရွယ်အစား၊ အသေးစိတ်အဆင့်နှင့်အလုံးစုံသောပုံစံနှင့်တည်ဆောက်ထားသည် 21319 ဗဟို Perkအလွန်ကောင်းမွန်သောပြသမှု၊ စွဲငြိဖွယ်ကောင်းသောကစားခြင်းနှင့်ပြပွဲ၏ ၁၀ နှစ်တာကာလအတွက်ရည်ညွှန်းမှုအမျိုးမျိုးအတွက်နေရာများစွာပေးသည်။
theme: Lego Creator Expert အမည်သတ်မှတ်မည် - 10292 အဆိုပါ Friends Apartments ဖြန့်ချိ: မေ ၁၉ (VIP)၊ ဇွန် ၁ (အထွေထွေ)
စျေးနှုန်း: £ 134.99 / $ 149.99 / € 149.99 အပိုင်းပိုင်း: 2,048 အသေးစားပုံများ: 7
တစ်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် 21319 ဗဟို Perk နှင့်နှစ်ဆအရွယ်အစား, အဆောက်အ ဦး နှစ်ဆနှင့်ရည်ညွှန်းရည်ညွှန်း 10 ကြိမ်အရေအတွက်ဖြစ်နိုင်သည်မှာလာမယ့် Friends, 10292 အဆိုပါ Friends Apartments တစ်ချက်ချင်း wow အချက်အစုံဖြစ်သင့်သည်။ ဒါပေမယ့်ဒီအကြောင်းကိုမပြောခင်ကဒီ wow factor ကဘယ်လောက်များများကိုမွမ်းမံပေးသလဲဆိုတာကိုမတည်ဆောက်ခင်မှာအဲဒါကိုတည်ဆောက်ခြင်း၊ Lego Friends ကောင်းမြတ်ခြင်း - ထိုလေးထောင့်ကွက်ကိုကျွန်ုပ်တို့အသိအမှတ်ပြုရန်လိုအပ်သည် art အမှန်တကယ်အစုံမှတစ် ဦး disservice ပါဘူး။
ပြားစေ Lego မော်ဒယ်လ်နှင့်၎င်းကိုအနုတ်လက္ခဏာဆောင်သည့်နေရာများနှင့်ဝန်းရံခြင်းသည် p ဖြစ်သည်art ဒီအစုံ၏ပုံမှန်မဟုတ်သောပုံသဏ္ofာန်တစ်ခုကံဆိုးအကျိုးဆက်ပေမယ့်မဆို box ကိုကြည့်ဖို့နေဆဲအံ့သြစရာ art တစ်ဘို့ Lego box ကိုဘယ်လောက်အလုပ်များများနှင့်တက်ကြွစဉ်းစားပါ 2021 art ဘို့ 21319 ဗဟို Perk နှိုင်းယှဉ်သည်။ ဒါ့ကြောင့်အရေးကြီးတာက box ပေါ်ရှိအရာများသည်ကောင်းမွန်သောတုန့်ပြန်မှုတစ်ခုဖြစ်စေသင့်သော်လည်း၎င်း box အတွင်း၌ရှိသောအရာများသည်အမှန်ပင်ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။
အတွင်းပိုင်းသည်အရွယ်အစားကြီးမားသည့်တည်ဆောက်မှုဖြစ်ပြီးမည်သည့်အတွက်မဆိုအမှန်တကယ်တည်ဆောက်ထားသည် Friends ပရိတ်သတ်, သူတို့ပဲပြပွဲသို့ရတဲ့သို့မဟုတ်ပြီးသားသူတို့ရဲ့ 20th အပေါ်ဖြစ်လိမ့်မည် အားလုံးရာသီ 10 ၏ပြန်လည်စောင့်ကြည့်။ 10292 အဆိုပါ Friends Apartments အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ ရည်ညွှန်းချက်များနှင့်အတူတကွစုစည်းထားသည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြသထားသည် - သင်လျှောက်လှမ်းစဉ်ကပြပွဲမှအချိန်ကုန်သက်သာခြင်း။art ၏ပျော်စရာ
ပထမ ဦး ဆုံးအိတ်ထဲမှ Chandler နှင့် Joey တို့၏ထိုင်နေသောထိုင်ခုံများကိုတည်ဆောက်ပြီး၎င်းတို့ကို unison ဖြင့်ပြန်လည်စုစည်းရန်ကစားနည်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိချိန်တွင် Lego ဒီဇိုင်းအဖွဲ့ကသော့မှပေးဆောင်ခဲ့သည် classic ပြပွဲမှအချိန်လေးနှင့်သူတို့ဘယ်လိုသူတို့ကျွမ်းကျင်စွာအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပါပြီ Lego ပုံစံ။
ယောက်ျားလေးများ '' AP နှင့်အတူပထမ ဦး ဆုံးartထို့နောက်မိန်းကလေးများနှင့်အတူသင်အတူတကွထားပါလိမ့်မယ် Lego ပြပွဲ၏ 10 နှစ်ကနေအချိန်လေးမဆိုအရေအတွက်ကပျော်စရာနှင့်ရယ်စရာခေါင်းညိတ်နှင့်အတူထုပ်ပိုးထားကြ၏။ Chandler နှင့် Joey တို့၏ကြက်နှင့်ဘဲ (သို့မဟုတ်အချည်းနှီးသောအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်)၊ သူတို့၏နူးလှေခါးထစ်၊ သူတို့တွယ်ကပ်ထားသည့် foosball စားပွဲနှင့်တံခါးပေါ်ရှိ whiteboard များမှာ - ပို၍ သပ်ရပ်သောမိန်းကလေးများ၏ ap တွင်ရှိသည်။artment - လသာဆောင်ပေါ်ရှိအမှိုက်များနှင့်ပြည့်နေသည့်လျှို့ဝှက်သောဗီရို၊ Giant Poking Device လသာဆောင်ပေါ်ရှိ၊ Thanksgiving for ကြက်သားကြီးနှင့်ကြောက်စရာကောင်းသောသုံးဖက်မြင် artဖိုဘီမှမယူသောကြောင့်မော်နီကာနှင့်ရာခေလတို့တိုက်ပွဲဝင်နေသော Gladys အမည်ရှိအလုပ်။
တစ်ခုချင်းစီကို ap ၏အပန်းဖြေဖြတ်ပြီး Dottedartment ၏သက်ဆိုင်ရာမီးဖိုချောင်နှင့်livingရိယာသည်ပြက်လုံးများမှပြက်လုံးများ၊ ဇာတ်လမ်းများနှင့်မင်းသားဇာတ်ကောင်များအားဤကဲ့သို့များပြားလှသောခေါ်ဆိုမှုများစွာရှိသည်။
အရေးအကြီးဆုံးကတော့၊ ဒီရည်ညွှန်းချက်အားလုံးဟာယုံကြည်စိတ်ချရမှုရှိတယ် - သူတို့ဟာအားရကျေနပ်မှုမရှိဘူး၊ Lego အဆိုပါ ap ၏ဗားရှင်းartမော်ဒယ်တစ်ခုလုံးအနေဖြင့်ဤမျှစစ်မှန်စွာဒီဇိုင်းထုတ်ထားပုံကိုဖော်ပြသည်။ ဖြစ်နိုင်သမျှများပြားလှသောဇာတ်လမ်းမှတ်စုများအပါအ ၀ င်သုတေသနနှင့်ဗဟုသုတအတိမ်အနက်သည် ap တစ်ခုချင်းစီ၏နောက်ခံအသေးစိတ်အချက်အလက်များစွာကိုဖမ်းယူနိုင်ခဲ့သည်။artဖြစ်နိုင်သမျှ ment ၏မီးဖိုချောင်နှင့်livingရိယာ။ ဒါကတကယ့်စစ်မှန်မှုပါcity သောအတူတကွချပြီးစေသည် Lego အားလုံးပိုပြီးပျော်စရာမော်ဒယ်။
နောက်ခံတွင်ကစားသည့်ကျပန်းဖြစ်စဉ်များနှင့်အတူတည်ဆောက်မှုကိုတည်ဆောက်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ ap နှင့်ပတ်သက်သည့်အရာများကိုသတိပြုမိပြီးမကြာခဏရှာဖွေနေသည်artကျနော်တို့အရင်ကသဘောပေါက်ဘယ်တော့မှ ment ပေမယ့်သော Lego အစုံဒါဂရုတစိုက်ညာဘက်ရဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, နှစ် ဦး စလုံးနေအိမ်များတစ်လျှောက်လုံးပုံပြင်နှင့်ဇာတ်ကောင်အကြောင်းကိုပွောငျးလဲကိုးကားအများကြီးရှိပါတယ်, ဒါပေမဲ့သူတို့အားလုံးတစ် ဦး ချင်းစီကို ap ဗားရှင်းထားရှိနေကြသည်artသင်ချက်ချင်းလက်ျာဘက်အဖြစ်လက်ခံသည်ဟုမှတ်ချက်ချပါ၊ 21319 ဗဟို Perk, အ Lego ဒီဇိုင်နာများသည်သူတို့၏သုတေသနနှင့်အတူနက်ရှိုင်းစွာသွားရန်အလွန်ဂရုစိုက်ခဲ့ကြသည်။
ဖြစ်နိုင်သည့်နေရာများတွင်နံရံများ၊ ကုလားကာများနှင့်မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများကိုအရောင်များနှင့်ကိုက်ညီစေပြီးနံရံ၏ ဦး တည်ရာနှင့်ထောင့်အပြောင်းအလဲတိုင်းကိုဖမ်းယူနိုင်ပြီးပရိဘောဂအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီနေရာချထားမှုသည်သာမှန်ကန်သည် (part.ရာဝတီ အစိမ်းရောင် Ottoman) ။
ဂရုတစိုက်စီစဉ်ထားသည့်အတိုင်းအစစ်အမှန်ကမ္ဘာစတူဒီယိုစုံများသည်ကြည့်ရှုသူအားအိမ်၏အိမ်သို့ချက်ချင်းလွယ်ကူစေရန်ဖြစ်သည် Friends အက္ခရာများသည်လည်းဒီဇိုင်းနှင့်တည်ဆောက်ပုံဖြစ်သည် 10292 အဆိုပါ Friends Apartments။ ထိုအရာအလုံးစုံခြစ်ရာကနေတည်ဆောက်နိုင်ဖြစ်ခြင်းအမှန်တကယ်များအတွက်ထူးခြားတဲ့အတှေ့အကွုံစေသည် Friends ဤအက်ပလီကေးရှင်းတိုင်းကိုသိသောသူများအတွက် - နှစ်များတစ်လျှောက်ပြပွဲအတွက်ကြည့်။ ပြန်လည်ကြည့်ရှုခံစားခဲ့ရသောပရိသတ်များartသို့သော်ဤအရာသည်အလွန်တုန်လှုပ်ဖွယ်ကောင်းသည့်အတွေ့အကြုံဖြစ်လိမ့်မည်။ ၎င်းတို့သည်အရာအားလုံးကိုသိသည်ဟုထင်မှတ်သူများအတွက်၎င်းသည်သင့်အားမျက်လုံးအသစ်များဖြင့်ပြန်လည်ကြည့်ရှုခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်။
တဖန်ပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု၏ဝမ်းမြောက်ခြင်းသည်ရှင်းလင်းသောနှင့်သိသာသောရည်ညွှန်းချက်များနှင့်အလွန်ထင်ရှားသောနောက်ခံအသေးစိတ်အချက်အလက်များအကြားကျဆင်းနေသောအရာများတွင်လည်းဖြစ်သည် - ဖြစ်ရပ်များနှင့်သင်အချိန်ကိုပထမဆုံးအကြိမ်သတိမပြုမိရန် ပို၍ သိမ်မွေ့သောညိတ်ညံမှုများရှိသည်။ Lego အုပ်စုအချို့ကအချို့သောစာအုပ်များတွင်အချို့ကိုခေါ်ဆိုသည့်အတိုင်းထင်သည်။
ဥပမာကောင်းတစ်ခုသည်တီဗွီတွင်ဖော်ပြထားသောအရာများဖြစ်သည်artMonica နှင့်ရာခေလ၏ ap ၌တည်၏artThanksgiving မှာ Monica ချက်ပြုတ်တာကိုရှောင်ရှားဖို့အတွက်ယောက်ျားတွေအားလုံးကဒီဂိမ်းကိုကြည့်နေတဲ့ဟန်ဆောင်နေတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုရည်ညွှန်းထားတဲ့အမေရိကန်ဘောလုံးပွဲပါ။ အပေါ်။
မှဤမျှလောက်လွမ်းဆွတ်မှုရှိပါသည် Friends နီးပါးတိုင်းအသေးစိတ်ထဲမှာပါဝင်သည် Lego အသေးစိတ်များများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့နှင့်အတူပြပွဲ၏အခြားမှတ်ဉာဏ်တစ်ခုသို့မဟုတ်အခြားမှာ tugs ထားနှင့် Lego တစ်ခုချင်းစီကို ap ၏ဗားရှင်းartအတွင်းမှာအများကြီးရှိပါတယ် 10292 အဆိုပါ Friends Apartments သင်ပြုံးရယ်မောရန်နှင့်ပြပွဲတစ်ခုလုံးကိုတဖန်ပျော်မွေ့စေရန်။ မင်းတောင်းနိုင်မယ့်ဘာမှမရှိဘူးမဟုတ်လား။
ကောင်းပြီ ... ပျောက်ဆုံးနေသည်ကိုသတိပြုရမည့်အရာများအမြဲရှိလိမ့်မည် (partလူတိုင်းမတူညီသောအကြိုက်ဆုံးအခိုက်အတန့်ရှိသည့်ပြပွဲ၏ကျယ်ပြန့်သောဆွဲဆောင်မှုကိုလက်ခံသည်။ ရာသီဥတု ၁၀ ခုမှအကြောင်းအရာများနှင့်ရည်ညွှန်းချက်များကိုရွေးချယ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောမတိုက်ဆိုင်မှုပြcertainlyနာမှာသေချာပေါက်ရှိသည်။ ဤအဆုံးစွန်သောပြissueနာသည်ပုံမှန်မဟုတ်သောအချိန်နှင့်ဆိုင်သောအရာများကိုချိန်ခွင်လျှာညှိပေးသည်articularly အဆိုပါယောက်ျားလေးများ '' AP အတွက်artဥပမာအားဖြင့်သင့်တွင်ခိုးယူသွားပြီးမှသာပေါ်ပေါက်လာသည့်နူးလှေနှင့်အတူမူလထိုင်ခုံများကဲ့သို့အရာများရှိသည်။
၎င်းသည်အခြားမဟုတ်သောထုပ်ပိုးထားသောအစုအတွက်သေးငယ်သောပြissueနာတစ်ခုဖြစ်သော်လည်းအနည်းငယ်ပိုမိုမြင့်မားသောအပိုင်းအစကိုဖြေရှင်းနိုင်ပြီး၎င်းသည်စုစုပေါင်းအတွေ့အကြုံကိုအဆင့်အသစ်သို့ပင်မြှင့်တင်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ပရိဘောဂများ၊ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်ကိုးကားချက်များပါ ၀ င်ပါကသင့်အနေဖြင့် ap တစ်ခုစီကို ၀ တ်ဆင်ရန်ခွင့်ပြုပါartp အရသိရသည် mentartပြပွဲ၏ icular ခေတ်, အချို့ဖြစ်စဉ်များ, ဒါမှမဟုတ်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်မည်သည့်လမ်းအတွက်။
ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုဆွေးနွေးနိုင်သောအရာဖြစ်သည်artအသက် ၁၈ နှစ်အရွယ်ထောက်ခံချက်နှင့်ဤသူသည်မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ဤပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်အတွက်၊ ၎င်းသည်အသစ်တစ်ခုကိုမည်သို့ရည်ရွယ်သည်ကိုနားလည်ခြင်းသည်အရွယ်ရောက်ပြီးသောပရိသတ်သည်မျှော်လင့်ချက်နှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုတို့နှင့် ပတ်သတ်၍ ကွဲပြားခြားနားသောလိုအပ်ချက်များကိုနည်းနည်း ပို၍ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်စေရန်အစု၏ဒီဇိုင်းကိုအသိပေးသင့်သည်။
ဟုတ်ကဲ့၊ သင်သည်ဤအရာကိုတည်ဆောက်လိမ့်မည်၊ သူတို့၏ ၁၀ နှစ်တာမျက်နှာပြင်သမိုင်းတစ်လျှောက်တွင်ပြောင်းလဲသွားပြီးဇာတ်ကောင်များကဲ့သို့ကြီးထွားလာသည့်စျေးနှုန်းအနည်းငယ်ပိုမိုမြင့်မားသောစျေးနှုန်းသည်ပြီးပြည့်စုံခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ခြင်းကိုပေါင်းစပ်နိုင်ခြင်းရှိမရှိသင်စဉ်းစားမိလိမ့်မည်။ သူတို့ကိုတှငျနထေိုငျခဲ့တယျ။ ဒါပေမယ့်လည်းပျော်စရာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုကိုရှာတွေ့နိုင်မှာပါ 10292 အဆိုပါ Friends Apartments အများဆုံး p များအတွက်ပါဝင်သည်ပါဘူးart သိပ်အရေးမကြီးပါဘူး
ဒီဟာကအပြည့်စုံဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး Lego အဆိုပါ ap ၏ဗားရှင်းart၎င်းသည်ဖြစ်နိုင်သည်ဟုဆိုသော်လည်း၎င်းသည်၎င်း၏စျေးနှုန်းနှင့်အရေအတွက်ကိုရရှိသောကြောင့်၎င်းသည်တစ်ပြားမှသို့မဟုတ်အုတ်ကိုမဖြုန်းတီးပါ။
အတူတူပဲ 21319 ဗဟို Perk, 10292 အဆိုပါ Friends Apartments စာလုံး ၆ လုံးပါ ၀ င်သည်artအချိန်လေးကနေ icular မတ်မတ် Friends။ ဤအရာများထဲမှအများစုကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည့်အရာမှာ Joey ဖြစ်ပြီး Chandler ၏ထိုင်ခုံနှင့်ပတ်သက်သောငြင်းခုံမှုများအပြီးတွင် Chandler ၏ ၀ တ်စုံများကို ၀ တ်ဆင်ပြီး Joey ဖြစ်သည်။ Chandler သည် Joey ၏အတွင်းခံအဝတ်အစားများအားလုံးကိုလက်တုံ့ပြန်ခြင်းဖြင့်ပုန်းနေခဲ့သည်။ Joey ၏တုန့်ပြန်ချက်မှာတစ်စုံတစ်ယောက်၏အတွင်းခံအဝတ်အစားကိုယူခြင်းနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။
Chandler သည် ၀ တ်စုံအင်္ကျီတစ်ထည်နှင့်အစောပိုင်းရာသီများ၌သူ၏ပုံပန်းသဏ္ဌာန်ကိုပိုမိုသတိပြုစေသည့်ကျယ်လောင်သောလည်စည်းတစ်ခုတွင်ရှိနေသည်။ အမှန်မှာ၊ သူသည်ဂျိုဝီတီဗီအတွက်တီထွင်ထားသောဖျော်ဖြေရေးစင်တာပေါ်တွင်သူဆွဲတင်ထားသောထိုဝတ်စုံအင်္ကျီ၏လက်မောင်းဖြစ်သည်artment - ဒါပေမယ့်အဲဒါကအရမ်းကြီးလွန်းပြီးသူတို့ရဲ့အိပ်ခန်းတံခါးနှစ်ဖက်စလုံးကိုဖြတ်သွားတယ်။
ဆွဲဆုတ်ထားသောလက်မောင်းသည်ဖျော်ဖြေရေးစင်တာကိုရောင်းချရန်ကြိုးပမ်းသည်။ ၎င်းသည်သူတို့၏ပစ္စည်းပစ္စယအားလုံးခိုးယူခြင်းခံရသည်။artအဲဒါကိုကနူးလှေခါးထစ်နဲ့ပို့ပေးလို့ရတယ်။ ဒါက Joey နဲ့ Chandler ရဲ့ ap လိုချင်သလိုပဲ။artကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ဖျော်ဖြေရေးစင်တာလည်းပါ ၀ င်ပါတယ်။ Chandler ရဲ့အသေးစားဓာတ်ပုံဟာပုံနှိပ်ထားတဲ့လက်တစ်ချောင်းလည်းပါ ၀ င်ပါတယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ဒီမှာသူရဲ့ဒီဇိုင်းမှာအမှားအယွင်းမရှိပါဘူး။
ရော့စ်၏အသေးစားအရုပ်သည်သားရေဘောင်းဘီနှင့်ပြည့်စုံပြီးရာသီအလိုက် (၅) တွင်သူအသုံးပြုသောကလေးအမှုန့်သို့မဟုတ်ဆီမွှေးများကိုသယ်ဆောင်လာသည်။ သူ၏ရက်စွဲအိမ်သာတွင်ပြန်လည်လာရန်ကြိုးစားနေသည်၊ ပူလွန်း။ ခေတ္တဖြုတ်ပစ်လိုက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ မိမိအစိတ်ပျက်ဖို့အများကြီး။ ၎င်းသည်ရော့စ်၏ပျော်ရွှင်ဖွယ်မကောင်းသောအမှားအယွင်းများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်အသေးအဖွဲပုံစံဖြင့်ခြေထောက်များကို 'ဘောင်းဘီ ၀ တ်' အောက်တွင်ထားရှိခြင်းမှအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေနိုင်သည်။
Monica ၏ဒီဇိုင်းသည် Season7အဝတ်အစားပေါ်တွင်အခြေခံပြီးသူမအိမ်နီးချင်းများအားပိုမိုသိကျွမ်းရန်ဆုံးဖြတ်ပြီးသကြားလုံးအချို့ကိုမုန့်ဖုတ်ပြီးအိမ်အပြင်ဘက်ရှိတောင်းထဲ၌ထည့်လိုက်သည်။ အိမ်နီးချင်းများကသကြားလုံးအလုံအလောက်မရနိုင်သဖြင့်မကြာမီအခြေအနေကလက်လွှတ်လိုက်ရသည်။ Monica ဟာချက်ပြုတ်ဖို့စိတ်အားထက်သန်မှုကိုပြသတဲ့ ၀ တ်စုံတစ်ခုဖြစ်ပေမယ့်လည်းပြပွဲရဲ့အားနည်းချက်တစ်ခုကလာတာပါ။
ရာခေလသည် ၁၉၉၀ ခုနှစ်အလယ်ပိုင်းဖက်ရှင်ကိုအလွန်အမင်းပြန်လည်သတိရစေမယ့် Season 1 အဝတ်အစားကို ၀ တ်ဆင်ပြီးပြသခြင်း၏အစောပိုင်းနှစ်များအတွင်းဇာတ်ကောင်ရဲ့အထင်ရှားဆုံးအသွင်အပြင်တစ်ခုအဖြစ်ကျယ်ပြန့်စွာရှုမြင်ခဲ့သည်။ ဇာတ်ကောင်နှင့်သူမ၏ ဦး ဆောင်စရိုက်များကိုအနည်းငယ်သာကိုးကားရန်မဟုတ်ရင်အခြား၌တွေ့နိုင်ပါသည် 10292 အဆိုပါ Friends Apartments, အအသေးစားရုပ်ပုံကတက်အောင်အချို့သောလမ်းတတ်၏။
အကယ်၍ အသေးသေးလေးတစ်ခုသည်ပြသမှုမှရောင်ပြန်ဟပ်ရန်ဆံပင်အပိုင်းအစနှင့်ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းနှင့်အပြောင်းအလဲကိုပင်ပြောင်းလဲလိုလျှင်၎င်းသည်ဖက်ရှင်ကို ဦး တည်သည့်ရာခေလဖြစ်သည်။ ဟုတ်တယ်၊ သူမ 'ရာခေလ' ဆံပင်နဲ့လာတယ် 21319 ဗဟို Perk, သို့သော်, ဒီပြန်လည်သုံးသပ်အတွက်နောက်ပိုင်းတွင်ဒီအစုံရဲ့ပရိသတ်ကိုများအတွက်မျှော်လင့်ချက်များအပေါ်ပိုမို ...
Phoebe သည်လည်းမတူညီသောဆံပင်ပုံစံမျိုးပါ ၀ င်သော်လည်းမျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းထက် ပို၍ သိုလှောင်ထားသည့်မတ်မတ်၊ အထူးသဖြင့်သူမပြသခဲ့သောရှည်လျားသောစီးမျောနေသောဆင်မြန်းမှုများနှင့် ၃ ပုံတွင်ဖော်ပြထားသောခြေထောက်ပုံနှိပ်ခြင်းတို့ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းနှင့်အတူ ဒီအစု၌အခြားအသေးစား။ ဤသည်တိကျတဲ့ဒီဇိုင်းကိုအလွန် p အပေါ်ထားပါတယ်artဖိဗေနှင့်ရာခေလအတူတကွအတူတကွအတူတကွပြောင်းရွှေ့သော icular ကာလ, ဒါကြောင့် Phoebe ရဲ့ p ၏ကောင်းတဲ့ကိုယ်စားပြုမှုအဖြစ်အလုပ်လုပ်တယ်articular စတိုင် - ဖြစ်နိုင်သည်ထက်ပိုအသံတိတ်သော်လည်း။
ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ဇာတ်ကောင်ပါပဲ 10292 အဆိုပါ Friends Apartmentsဟုတ်လား ငါတို့ဘယ်သူ့ကိုမှမမေ့သေးဘူး ... ooooh my gooood, သတ္တမမြောက်ဇာတ်ကောင်လည်းဖြစ်တဲ့ Janice ပါ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ Janice ဆိုတာပြဇာတ်ထဲကဇာတ်ကောင်တစ်ယောက်ပါ။ Chandler နဲ့ထပ်ခါထပ်ခါပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးနဲ့အမှတ်တရအမှတ်ရစရာတွေဖြစ်တဲ့ပြဇာတ်စကားလုံးနဲ့ရယ်မောခြင်းတွေဟာသူမပြန်ပေါ်လာပြီးသူမဆင်းရဲသူတွေကိုမိမိကိုယ်ကိုကြေငြာလိုက်တဲ့ပြပွဲထဲကဇာတ်ကောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ရမယ်။ နှင့်မသင်္ကာဂိုဏ်း။
Janice ရဲ့မတ်မတ် p ခဲ့ကြသည်artပြပွဲတစ်ခုလုံးကိုစွဲမှတ်သွားစေသည့်အပြင်ဒီဇိုင်းအဖွဲ့သည်သူမ၏ကျားသစ်ပုံနှိပ်ထိပ်တစ်ခုမှသေးငယ်သောပုံစံဖြင့် ap ကထိပ်ဆုံးမှထူးချွန်စွာပြန်လည်ဖန်တီးပေးခဲ့သည်။articularly ကြီးမားသော hairpiece နှင့်နှစ်ခုအကြားရွေးချယ်ဖို့တောက်ပမျက်နှာအသုံးအနှုန်းတွေ။
နီးပါးအတိအကျနှစ်ဆအပိုင်းအစအရေအတွက် 21319 ဗဟို Perk နှင့်အရွယ်အစားနှစ်ဆ Lego Ideas ထား, သင်မျှော်လင့်ထားလိမ့်မယ် 10292 အဆိုပါ Friends Apartments ပေါင် ၁၃၀ လောက် ၀ န်းကျင် ၀ င်နိုင်ဖို့အတွက်ပေါင် ၁၃၄.၉၉ / ဒေါ်လာ ၁၄၉.၉၉ / ယူရို ၁၄၉.၉၉ မှာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ထို့အပြင်အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်အစုအဝေးကိုအမှန်တကယ်ပိတ်ဆို့ရန်နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုနှင့်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုသဘောသဘာဝကိုရရှိရန်အတွက်ဖြစ်သည်။xtra အပိုင်းအစများ Lego တကယ်ပိုကောင်းတဲ့တန်ဖိုးကိုကိုယ်စားပြုနိုင်တယ်။
၎င်းကိုလည်းသုံးသပ်ကြည့်ပါ Friends ပရိသတ်များဖွယ်ရှိ - နှင့်အမြော်အမြင်ရှိရှိ - ဆီသို့ ဦး တည်သွားလာလိမ့်မယ် 21319 ဗဟို Perk ပထမ ဒါဟာပိုပြီးအထင်ကရနှင့် All- ပတ်ပတ်လည်ပိုကောင်းပါတယ် Lego အရောင်, ဖန်တီးမှုနှင့်ထုပ်ပိုးပြပွဲမှကိုးကားများနှင့်ပိုမိုသုံးစွဲနိုင်စျေးနှုန်းအချက်မှာနှင့်အတူ set, set ။
ပိုမိုမြင့်မားသောစျေးနှုန်းဖြင့်ဖြစ်နိုင်သည်ကိုအာရုံစိုက်ခြင်းသည်ဤဘတ်ဂျက်နှင့်ဤအပိုင်းအစများအတွင်းကမ်းလှမ်းချက်များကိုမကျေနပ်သောကြောင့်၎င်းသည်ဤအစုကိုမမျှတစွာနှိုင်းယှဉ်စေသည်။ သူတို့အားအမှတ်အသားများကိုသာကြည့် 10292 အဆိုပါ Friends Apartments ကမ်းလှမ်းမှု Friends ပိုမိုမြင့်မားသောဘတ်ဂျက်ဖြင့်လည်ပတ်နေသည့်ပရိသတ်များသည်စိတ်စွဲလမ်းမှုနည်းပါးစေရန်စိတ်စွဲလမ်းမှုအတွက်နည်းလမ်းသစ်ကိုအသုံးပြုသည်။ ထိုစျေးနှုန်းကိုမျှတအောင်လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်။
အဆိုပါ Lego Creator Expert ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အောင်မြင်မှုရရှိစေရန်ကြိုးပမ်းရာတွင်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲရေးအဖွဲ့သည်မ ၀ င်နိုင်သည့်အလုပ်တစ်ခုရလိမ့်မည် 21319 ဗဟို Perk.
ကောလာဟလတွေကငါတို့ Monica ရဲ့ ap ကိုရပြီလို့ပြောနေတယ်artမျှော်လင့်ချက်များပြည့်နှက်နေသောနေရာဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် Joey နှင့် Chandler တို့၏နေရာအတွက်ဖြစ်နိုင်ချေတစ်ခုနှင့် ပတ်သက်၍ တွေးမိသည်။ Central Perk ကဲ့သို့အရွယ်အစားနှင့်ဘတ်ဂျက်ပတ် ၀ န်းကျင်သည်အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်၊ sitcom မှတည်နေရာအသစ်ကိုယူပြီး၎င်းကိုထပ်မံပေးခြင်း အုတ်ထဲမှာ။
သို့သော် ၁၀၂၉၂ သည်မော်နီကာ၏အက်ပလီဖြစ်ဟန်မရှိသေးပေartထို့အပြင် Joey နှင့် Chandler တို့၏ AP လည်းမဟုတ်ချေartment ။ ယင်း အဆိုပါ Apartသူတို့နှစ် ဦး စလုံး၏အမြင်နှင့်၎င်းသည်အမှန်တကယ်ကြီးမားသောနှင့်မမျှော်လင့်ဘဲဖြစ်ပေါ်စေသည် Lego အစုံ သက်ဆိုင်ရာ ap ၏ထောင့်တိုင်းတွင်အသေးစိတ်မည်မျှအလုပ်လုပ်သည်ကိုစဉ်းစားခြင်းသည်အရွယ်အစားနှင့်အရွယ်အစားအတွက်မှတ်သားဖွယ်ဖြစ်သည်art၎င်းသည်သုတေသနနှင့်အလုပ်အတွက်အထောက်အထားဖြစ်သည် Creator Expert အဖွဲ့သည်ပုံစံကိုဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်။
ဒါဟာအလုပ်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ရတာပျော်စရာ၊ ကစားရတာပျော်ဖို့ကောင်းပြီးကောင်းမွန်စွာဖန်တီးနိုင်အောင်ဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့ဒီတစ်မျိုးမျိုးကိုဖန်တီးခဲ့တာပါ။ Friendsအဘယ်သူမျှမကအခြားတူသော - စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်အတွေ့အကြုံ။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီအစီအစဉ်မှာပါ ၀ င်နိုင်တဲ့အရာများစွာရှိနေသေးတယ်၊ အဲ့ဒီအကြောင်းပြချက်အတွက်တော့လုံးဝမပြီးဆုံးနိုင်ဘူး၊ ပြပွဲရဲ့ ၁၀ နှစ်တာကာလအတွင်းရွေးချယ်မှုတွေကဖန်တီးမယ့်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးရဲ့မတိုက်ဆိုင်မှုအတွက်ပါ။ ဒါက part, အမှန်တကယ်ကသင့်ရဲ့လွမ်းဆွတ်မှုအစပျိုးခြင်းနှင့်သင် AP အတွက်ဖြစ်ပျက်သမျှကိုစဉ်းစားရရှိသွားတဲ့ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းဖို့သေတမ်းစာဖြစ်ပါတယ်artပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း, ကဆင်းရန်ဖြစ်ပါသည်ဖြစ်စေမ Lego ဖြေရှင်းရမည့်အုပ်စုသည်အသက် ၁၈ နှစ်အထက်ထောက်ခံချက်နှင့်ဤသတ်မှတ်ချက်အပေါ်ပိုမိုနားလည်မှုပေါ်တွင်မူတည်သည် Lego ပရိတ်သတ်ဒီမှာရည်ရွယ်လျက်ရှိသည်။
ဒါကဘေးဖယ်နှင့်၏စုစုပေါင်းသည် Lego မင်းရှေ့မှာထား 10292 အဆိုပါ Friends Apartments ရုံ 2,000 ကျော်များအတွက်အလွန်ကြီးစွာသောသဘောတူညီချက်ထားရှိ Lego အဲဒီအပိုင်းတွေထဲကတစ်ခုခုလိုမျိုးခံစားမှုမရှိဘဲဖြုန်းတီးသွားတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပိုမိုမြင့်မားသောအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အနည်းငယ်ပိုမိုမြင့်မားသောစျေးနှုန်းများကကျွန်ုပ်တို့အား ၀ ယ်နိုင်သော်လည်းမည်သို့ဖြစ်မည်ကိုအိပ်မက်မက်နေသည်art အတွက်စိတ်ပျက်ခံရဖို့အခြားနည်းနည်းရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါက 10292 အဆိုပါ Friends Apartments.
အဘို့အ Friends Up ကို Save ဖို့ပရိသတ်များ။
ဆောက်လုပ်ဖို့ဘယ်လောက်ကြာမလဲ Lego Creator Expert 10292 အဆိုပါ Friends Apartစိတ်ထဲကလော။
၆ နာရီလောက်ကြာတယ် (ဒါမှမဟုတ် ၁၅ နာရီခွဲလောက်) Friends) အတူတူထားရန် 10292 အဆိုပါ Friends Apartments ရေတွက်အိတ် 15 အစုံကိုဖြတ်ပြီး။
ဘယ်နှစ်ယောက်အပိုင်းပိုင်း၌ရှိကြ၏ Lego Creator Expert 10292 အဆိုပါ Friends Apartစိတ်ထဲကလော။
2,048 အပိုင်းပိုင်းရှိပါတယ် 10292 အဆိုပါ Friends Apartments, တစ်ခုတည်းသောအခြားအတွက်လာသောနံပါတ်နှစ်ဆနီးပါး Friends Lego အစုံ, 21319 ဗဟို Perkခုနစျပါး minifigures ။
ဘယ်လောက်ကြီးတယ် Lego Creator Expert 10292 အဆိုပါ Friends Apartစိတ်ထဲကလော။
ပြီးပြည့်စုံတဲ့ပုံစံတစ်ခုအနေနဲ့ 10292 အဆိုပါ Friends Apartments အကျယ်ဆုံးအကျဆုံးမှာ ၆၄ စင်တီမီတာဖြစ်သည်။ အဝေးဆုံးနံရံမှအရှေ့ရှေ့ဆုံးအနီးဆုံးနံရံအထိ ၃၁ စင်တီမီတာ၊ အမြင့် ၁၀ စင်တီမီတာကျော်ရှိသည်။ အဆိုပါယောက်ျားလေးများ 's apartအကျယ်မှာ ၂၉ စင်တီမီတာနှင့်အနက်မှာ ၂၂.၅ စင်တီမီတာဖြစ်သည်artအကျယ် ၃၀ စင်တီမီတာနှင့်အနက် ၂၄ စင်တီမီတာရှိသည်။
Lego ဘယ်လောက်ကျပါသလဲ Creator Expert 10292 အဆိုပါ Friends Apartments ကုန်ကျ?
10292 အဆိုပါ Friends Apartments ယူကေတွင်ပေါင် ၁၃၄.၉၉၊ ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်ဒေါ်လာ ၁၄၉.၉၉ နှင့်ဥရောပမှယူရို ၁၄၉.၉၉ မှကုန်ကျသည်။ ဒါကစျေးနှုန်းထက်နှစ်ဆကျော်ပိုပါတယ် 21319 ဗဟို Perk.
← Lego Speed Champions 76900 Koenigsegg Jesko ပြန်လည်သုံးသပ်
Lego 12 အတွက်အကောင်းဆုံးကိုးကား 10292 Friends Apartments →